Vlọ Ọrụ Na-ahụ Maka flọ Ọrụ Agụmakwụkwọ Nevada Ozi na Ihe Nleta
Can nwere ike ịhọrọ ụlọ ọrụ Nevada Aged Corporate anyị na ụlọ ọrụ Nevada shelf. Will ga - ahụ Shellọọrụ ụlọ ọrụ Shelf, Age LLC na ọbụlagodi mmemme nkwalite otuto nwere ike itinye gị na ụlọ ọrụ gị. Nevada na-enye ọtụtụ uru, iji mụtakwuo banyere Ejikọ ọnụ na Nevada, ị nwere ike ịmụ banyere uru ụtụ isi Nevada, iwu azụmaahịa dị mma, ụdị ngwaahịa nwere ike inye n'ọdịnihu na ozi ndị ọzọ na - etinye ọnụ.
Uru Nevada shelf Corporation dịla nkpa
Can nwere ike bido ị rite uru ozugbo inwe ụlọ ọrụ azụmaahịa Nevada gị site na ịhọrọ ịzụta ihe etinyeburu, ma ọ bụ Gedlọ Ọrụ Nevada shelf.
Agedlọ ọrụ Nevada merela agadi na-enye ụlọ ọrụ Nevada na ndị ọzọ uru dị otu. Ha abụọ bụ ndị na-akwụghị ụgwọ ụtụ isi nke steeti, nwere iwu nchebe nchekwa bara ụba yana nzuzo nke mmadụ. (Okwu a “shelf” pụtara na ụlọ ọrụ ahụ hiwere tupu ụbọchị azụtara ma na-anọdụkwa na shelf na-eche onye ahịa chọrọ ụlọ ọrụ agadi.)
Nleta na Ozi Nke Ọzọ Nevada shelf Company
Ndị nwere ụlọ ọrụ merela agadi na Nevada abụghị ihe metụtara ọha.
Nzuzo - Nevada anaghị ekerịta ozi ụlọ ọrụ na Ọrụ Revenue (IRS). N'ịbụ ndị na-enweghị ego ụtụ isi na-akpata ego, ha anaghị achịkọta ozi dị otú ahụ ịkekọrịta. (Dị ka o kwesịrị ịdị, anyị na-akwado irube isi na ndị isi ụtụ isi.)
Nchedo bara uru - Naanị Nevada (dịka nke a edere) na-echebe ndị nwere oke aka wee hapụ ihe ha nwere mgbe aka ha gbara akwụkwọ.
Kpụpụta ngwa ngwa & nzipu ozi - enwere ike itinye akwụkwọ Nevada Corporation kwesịrị ekwesị. Enwere ike inye ụlọ ọrụ agadi na Nevada ozugbo.
Angwọ Mmefu Ọhụrụ Kwa Afọ - Mmalite ọhụrụ kwa afọ nke gụnyere ịdepụta ndepụta nke ndị isi na ndị isi bụ naanị $ 125 kwa afọ maka ọtụtụ ndị ahịa dịka edere a.
Họta Ndị Isi na Ndị Nduzi Ndị ọzọ - Ndị na - eketa oke na-achịkwa ụlọ ọrụ ahụ. Yabụ, ị nwere ike ijikwa ụlọ ọrụ gị ma mee ka aha gị ghara ịdeba na ọha na eze site na ịhọpụta ndị isi na ndị isi nke atọ kwenyere na ị ga - akwado gị na ndekọ ọha. E nwere ndị na-eme ememme na ndị ọzọ, ọ bụ ezie na ha na-agbasochaju anya, na-ahọrọ naanị ego nzuzo na nzuzo. Ọzọ, nke a ka a ga-eji na usoro iwu kwadoro.
Maka polọọrụ Uru
Ndị ụlọ ọrụ uru bụ ndị IRS na-ahọpụta ụlọ ọrụ “C” ma ọ bụ ụlọ ọrụ “S”. Na-ekwukarị na ụlọ ọrụ "C" na-akwụ ụtụ iche iche maka ndị na - ekenye ego ma ebe ụlọ ọrụ "S" ndị nwere ike ntanetị bụ ụtụ isi maka uru ụlọ ọrụ.
Feesgwọ steeti maka ndepụta ndị ọrụ na ndị isi na kwa afọ na Nevada bụ $ 125 ugbu a.
Chọgharịa ụlọ ọrụ toro eto na Nevada Inventory